Warbixinta xaaladii ugu danbeysay COVID19 Soomaaliya – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Warbixinta xaaladii ugu danbeysay COVID19 Soomaaliya
Wasiirada Wasaaradda Caafimaadka Dr. Fawziya Abikara Nur ayaa manta bulshada la wadaagtay sidii caadada aheed xaaladaha cusub ee caabuqa COVID-19.
Wasiiraka ayaa 24kii saac ee ugu danbeesay xaqiijisay 38 xaaladood cusub oo COVID-19 ah.
35 xaaladood ayaa laga helay Gobolka Banaadir halka 3 xaaladood ee kale laga helay Maamulka Somaliland. Wadarta guud ee xaaladaha caabuqa COVID-19 ayaa ah 873 xaaladood, waxaa geeriyooday 1 bukaan, waxaana bogsaday 12 bukaan.
Wasiirka ayaa bulshada xasuusisay maahmaahdii aheyd ‘’Ka hortagga ayaa ka wanaagsan daaweynta’’ una sheegtay bulshada qeybaheeda kala duwan inay xil iska saaraan xakameynta caabuqa COVID-19, lana yimaadaan ficiladda ka hortaga ah sida dhaqidda gacmaha, kala fogaanshiyaha dadka iyo yareynta aadida goobaha la isugu yimaado.
Previous articleAMISOM oo soo dhoweyneysaa go’aanka hogaamiyaasha #Somalia, #Kenya, iyo #Ethiopia si loo baaro dhacdada.
Next articleAXKAAMTA SOONKA – Dersiga 3AAD